WatchOS 6 iri kupa vamwe vashandisi matambudziko ebhatiri. | Ndinobva mac
WatchOS 6 iri kupa vamwe vashandisi matambudziko ebhatiri.
Nekuvhurwa kweWatchOS 6 Nyamavhuvhu apfuura, inowanikwa kune ese Apple smart smart mamodheru, Mabasa matsva, kunyorera, nzvimbo uye maficha zvakaunzwa izvo zvinonyanya kubatsira.
Nekudaro, zvinoita sekunge hazvisi zvese zviri kushanda kuti zvigadzirwe, nekuti Vazhinji vashandisi vari kuzviti vane matambudziko ebhatiri, kwete chete kune avo vakaisa vhezheni 6 asiwo kune avo vane mhando nyowani yeApple Watch, akateedzana 5.
WatchOS 6 inogona kunge ichidya bhatiri rakawanda kupfuura zvaitarisirwa.
Avo vakataura nezvematambudziko ebhatiri vanobvuma kuti vane WatchOS 6 yakaiswa. Vanenge vese vanoti ivo havasvike kumagumo ezuva neiyo imwechete muzana sepamberi pekuisirwa kwavo. Ichokwadi kuti mashandisiro uye zvinoshandiswa zvavakaisa zvinobatsira asi zvinogona kunge zvisina kunyatsogadziriswa.
Apple Watch Series 5 varidzi Ivo vanoti iri dambudziko rekupfeka kune iro Rinogara Riratidzwa. Iyi sisitimu nyowani inoita kuti wachi irambe ichiramba iripo kuitira kuti mushandisi agone kubvunza ruzivo rwunopihwa newachi nenzira yakasununguka uye nekukurumidza. Saizvozvo pane kuvandudzwa kana basa iri rakaremara uye kupenya kwakadzikiswa kubva kuApple application.
Asi avo vane chero imwe modhi, vakatamburawo mhedzisiro yekusvika kumagumo ezuva neyakaenzana kwazvo bhatiri muzana. Vamwe vashandisi vanoti iro dambudziko rinogadzirwa neiyo nyowani yekuona ruzha application, izvo zvinoita kuti wachi iteerere kunharaunda yedu nguva dzose, kutinyevera kana iyo dB yakakwira. Hazvizivikanwe chaizvo chii chiri kukonzera kuderera kwenguva yekushandisa.
Ndinovimba pamwe neshanduro yeWatchOS 6.1 matambudziko ari kunyeverwa anogona kugadziriswa nekukurumidza uye nemufaro kune vashandisi. Parizvino tiri mubeta rechipiri kune vanogadzira iyi vhezheni itsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 6 iri kupa vamwe vashandisi matambudziko ebhatiri.
Ruzha-kudzima AirPods inoonekwa mune yazvino iOS beta
Mutambi weBlack Phanter kukanda muApple TV + nhevedzano pamusoro paKevin Durant